Kudzokorora Kunotungamirwa Nenharaunda Micheka Yakanaka Kune Maitiro Makuru MuRamangwana Indasitiri
Zara kambani yemubereki Inditex Group yakazivisa pamusangano wayo wepagore muna Chikunguru 16, 2019 yenguva nguva kuti zvitoro zvayo zvinosvika mazana manomwe nemazana mashanu zvichawana kugona kukuru, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza na2019. Iva ...
Muunganidzwa wemhando uye machira emachira emumba
Zvakawanda zvakangoshongedzwa shamwari yeimba angasarudza kutenga zvishongo zvishongo zvakaisvonaka, zvinoshanda zvemachira epamba zvigadzirwa. Zvino rudzii rwezvigadzirwa zvemachira uye machira? Mhando dzemachira emumba ...
Nyowani weVatengi Fekitori Kuongorora
muna Gumiguru 2018, vamiririri vevatengi vatsva vekunze vakashanyira suzhou kutaurwa nezvemaindasitiri uye bhizinesi co. mutengi uyu mutengi mutsva uyo akasaina kambani yedu uye akashandira pamwe nezviratidziro zvekunze muna february 2018. ...
Kutora chikamu kweKambani Muiyo Autumn Canton Fair Yakaguma Zvinobudirira
suzhou mentionborn indasitiri nekutengeserana co., ltd. vakapinda mumabiko emabhizimusi ekushambadzira akaitirwa muguangdong muna Gumiguru 2019. zvigadzirwa zvemachira zvakagamuchirwa zvakanaka nevatengi vese kumba nekune dzimwe nyika, uye mentionborn akasaina zvibvumirano nemakambani mazhinji. ...
Varume Vanokurumidza-Kuomesa Vakarukwa Mapfupi, Bhachi reMitambo, Yakapetwa-Yakatenderedzwa Flannel Blanket, Varume Vakasarudzika Sports Bhurugwa, Mharidzo Kugadziriswa Uye Kugadzira, Kukurumidza-Kuomesa Sports Shorts,